आज तपाईको दिन यसरी बित्नेछः कात्तिक १ गतेको राशिफल – Sagarmatha Online News Portal
आज वि.सं. २०७७ कात्तिक १ गते शनिवार । तदनुसार इ.स. २०२० अक्टोबर १७ तारिख । नेपाल संवत ११४० कौलाथ्व । आश्विन शुक्लपक्ष । प्रतिपदा, २३ः२९ उप्रान्त द्वितीया ।
केही अलमल भए पनि नियमित काम सम्पादन हुनेछन्। नयाँ काममा भने लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न केही बाधा पर्नेछ। छोटो समयमा उपलब्धि नहुन सक्छ। अध्ययनमा समय दिन नसकिए पनि बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। व्यापारमा सामान्य फाइदा हुनेछ। पशुपालन र कृषिमा पनि सामान्य लाभ मिल्नेछ। सन्तानको साथले रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ ।
विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ । सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। पुरुषार्थी कामले समाजमा स्थापित बनाउनेछ। चुनौती पन्छाएर पनि नयाँ काममा जग बसाउने मौका छ ।
चुनौतीभित्र अवसर खोज्ने समय छ। नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ। पहिलेका कमजोरी बाहिर आउनाले प्रतिष्ठामा समस्या पर्न सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर रहनाले सोचेको उपलब्धि तत्काल नपाइएला। आफ्ना सूचना बाहिरिने समय रहेकाले गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। सामाजिक कामको जिम्मेवारी प्राप्त हुने समय छ ।